Blaogin'ny media sosialy | Martech Zone
Alarobia, Febroary 13, 2008 Asabotsy, Jona 27, 2015 Douglas Karr
Ny fomba fiteny taloha an'ny haino aman-jery malalaka dia ny eyeballs = vola. Lojika voafitaka izay eken'ny besinimaro ankehitriny dia izany Bebe kokoa volomaso = Bebe kokoa vola. Hitanay ireo tranonkala media sosialy toa Digg, MySpace ary Facebook lembalemba ary mihena aza ny fandraisana anjara.
Matoky aho fa ireo tranokala rehetra ireo dia hihemotra ary hilaza aminao fa mitombo ny isan'ny eyeballs. Marina izany tsy vaovao tsara. Raha latabatra na alaina ny fandraisana anjara ary mitombo ny isan'ny mpampiasa dia misy hafatra ao amin'ny matematika! Mandany fotoana kely kokoa ny mpampiasa antonony… na ny isan'ny mpampiasa miha-mandao tanteraka ny serivisy.
Ny fakam-panahy hitombo vaventy dia eo foana… ny eyeballs bebe kokoa afaka mitondra vola bebe kokoa. Na izany aza, ny loza mety hitranga amin'ny eyeballs lava dia mety handevina ny lazan'ny tranonkalanao, na hahatonga azy io ho lasibatra goavan'ny SPAM. Ireo tranonkala ireo dia tokony ho malina kokoa tamin'ny famakafakana ny fitomboan'ny tranokalany manoloana ny fiantraikan'ny mpampiasa efa misy. Raha nanao izany izy ireo, dia mety ho hitany fa, mba hampitomboana ny tombom-barotra, dia nisy a habe marina mankany amin'ny tranokalan'izy ireo mba tsy hihoatra ny lasa fa tsy hitady fitomboana.
Urban Blight = Loza amin'ny haino aman-jery sosialy
Ny olana dia tena fototra, ny faharatsian'ny tanàna. Fony aho nipetraka tany Phoenix, Arizona nandritra ny herintaona dia namaky betsaka momba ny fahasimban'ny tanàna izay nitranga. Tany amin'ny faramparan'ny taona 80, ny tanànan'ny Phoenix dia nitombo tamin'ny taha mitaky izany, ka tsy nisy afaka nahatanty ny tampony - afovoan-tanàna. Rehefa nanjary feno hipoka be ny manodidina ary nanjary korontana ny fifamoivoizana dia nifindra tany amin'ny tanàna vaovao izy ireo.
Ireo sekoly vaovao ireo dia nanana sekoly vaovao, trano vaovao, tany sy hazo maro hafa ary mpifanila vodirindrina aminy - tsy lazaina intsony ny rivotra madio sy efitrano malalaka hifamezivezy. Nanjary akaiky kokoa ny mpifanila vodirindrina aminao ianao… satria tsy nifindrafindra sy nivoaka izy ireo… nanatrika hetsika ara-tsosialy ary niresaka momba ny fefy.
Nampiasaina tamin'ny haino aman-jery sosialy, mino aho fa mitovy ny zava-mitranga. Ny votoatin'ny Digg dia miaina fahasimbana amin'izao fotoana izao - ireo mpampiasa nanampy tamin'ny famoronana serivisy nanjary nalaza dia nanjary diso fanantenana ary mitady fomba hafa. Miaraka amin'ny MySpace, ny valiny dia Facebook. Ankehitriny ny Facebook dia nitombo lehibe tahaka ny MySpace ary ny lembalemba mitovy ihany no niseho - tamin'ity indray mandeha ity tamin'ny hafainganam-pandeha haingana.
Ho aiza daholo? Heveriko fa ny valiny dia ny fanafihan'ny micro-tambajotra mipoitra. Miala any afovoan-tanàna ny olona ary mivoaka mankeny amin'ny tanàna ambanivohitra.
Ny hafatra ho an'ny mpivarotra
RNH, vaovao tsara ho an'ny Mpivarotra izany. Ny fampiasana teknika fanaovana dokambarotra midadasika izay mahatratra eyeballs marobe (fa ny mpividy kely) dia lasa tsy dia malaza intsony. Ny fitadiavana tranonkala micro izay mifanena amin'ny akany tianao ho tonga dia lasa malaza kokoa. Raha izaho manokana dia mahazo fangatahana bebe kokoa amin'ny fidiram-bolan'ny dokam-barotra ho an'ny tranokala misy ahy, toa ahy Navy Vets.
Ny fotoana laniana amin'ny fampielezana fampielezan-kevitra amin'ny marketing amin'ireo tranonkala rehetra ireo dia mety hahavita ny fahasamihafana amin'ny vidin'ny ol fotsiny batch sy fipoahana teknika, na izany aza. Mora ny manjono miaraka amin'ny dinamita, nefa manaporofo izany fa tetika mampidi-doza amin'ny Internet. Izany dia mitaky ny fanovan'ny mpivarotra ny paikadin'izy ireo, mitaky azy ireo hiasa mafy amin'ny hafatra mety amin'ny fotoana mety - ary koa ny fananganana fisian-tserasera mahafinaritra manana laza miavaka.
Tsy nisy nilaza fa ho mora izany!
Tags: mampikorontananavy vetshaino aman-jery sosialytambajotra sosialy
Febroary 15, 2008 amin'ny 1:27 PM
Ny media sosialy no orinasa tsy ampoizina indrindra. Ny ankamaroan'ny tranonkala toy ny MySpace na FaceBook dia mikendry tanora ary araka ny fantatsika dia mety hanova haingana ny tsirony ny karazan'olona toy izany.
Tadidinao ny Globe? Tambajotra sosialy voalohany - "dotcom bubble" izay nahatratra 200 tapitrisa dolara ary very ny zava-drehetra tao anatin'ny 1 andro.